China Forklift rim for Linde kunye BYD China OEM umenzi mveliso kunye nabenzi | Hywg
Yeyiphi irim yeforklift?
Inkqubo ye- umda we forklift I-asselmbled idityaniswe namavili ukuthatha ubunzima obukhulu bezithuthi kwaye ziqengqeleke ngokukhawuleza kwiimeko ezahlukeneyo. Umda weforklift ibaluleke kakhulu kubomi be forklift kunye nokusebenza ngokukuko, kulungile umda we forklift inokuthwala ubunzima obukhulu kwaye incede ifolokhwe yokubaleka iqhubeke kakuhle nangokufanelekileyo. Kubaluleke kakhulu ukuba ifolokhwe ibe namandla, ithembeke kwaye kube lula ukuyinyusaumda we forklift. Imveliso yethu HYWGumda we forklift lukhetho olufanelekileyo kubanini beforklift kuba sinobungqina bekhwalithi, ixabiso elifanelekileyo kunye noluhlu olupheleleyo lweerim zefolk uninzi lweempawu. Singumvelisi we-OEM yamagama amakhulu afana neLinde kunye ne-BYD.
Zingaphi iindidi zeerokhwe ze forklift?
Zininzi iintlobo ze Iifolokhwe ze forklift, Echazwe sisakhiwo inokuqhekeka ngaphakathi, kwi-2-PC, kwi-3-PC nakwi-4-PC. Ukwahlulahlula rim zincinci kwaye zilula kwaye zisetyenziswa yifolokhwe encinci, i-2-PC rim kulula ukuyinyusa, i-3-PC kunye ne-4-PC rim zisetyenziswa yifolk ephakathi kunye enkulu, zinokuthwala umthwalo onzima kunye nesantya esiphezulu. Iifolokhwe zombane zihlala zisebenzisa i-3-PC kunye ne-4-PC rim kuba kubungakanani obufanayo irim ingathwala umthwalo ongaphezulu kwaye zibaleke ngakumbi kunezinye iintlobo zeerim.
Yenzelwe ntoni irim ye forklift?
Eyethu umda we forklift Ingasetyenziselwa iimveliso ezahlukeneyo ezinje:
3.00D-8 Umehlulelwano 5.00-8 ILinde, iToyota, iNissan
4.33R-8 Umehlulelwano 16x6-8 ILinde, iToyota, iNissan
I-4.00E-9 Umehlulelwano 6.00-9 ILinde, iToyota, iNissan
5.00F-10 Umehlulelwano 6.50-10 ILinde, iToyota, iNissan
5.00S-12 Umehlulelwano 7.00-12 ILinde, iToyota, iNissan
Izibonelelo zethu zomtya we forklift?
(1) Sinokubonelela kungekuphela umda we forklift gqibezela kodwa umda we forklift izinto ezinjengendandatho yokutshixa, iringi esecaleni, ii-flanges kunye nezihlalo zeebhedi
(2) Uncedo lwethu kukuba sinesixhobo sokugaya esenziwe ngesinyithi esivelisa izinto zerim ezinjengendandatho yokutshixa, iflange, iringi esecaleni, isihlalo sebhedi i-100% ngokwethu, sinikezela ngomgangatho ophezulu kunye nexabiso elifanelekileyo.
(3) Sinoluhlu olupheleleyo lwe umda we forklift kubandakanya iarim yokwahlulahlula kwimizi-mveliso, i-2-pc rim, i-3-PC rim kunye ne-4-PC rim, sinokubonelela ngazo zonke iintlobo zeerim ze-forklift.
(4) Umgangatho wethu ubonakaliswe yi-OEM enkulu efana neLinde, i-BYD kunye nabanye abavelisi beforklift.
Egqithileyo Umphetho wokumba umgodi ubungakanani bomenzi we-OEM ukusuka kuma-33 ukuya kuma-63 ″
Okulandelayo: Umzi mveliso we-Boom lift ophethe i-Tele china manufacturer